तस्बिर : कविता थापा/नवराज कट्टेल/सिराज खान/अमृत बास्कुने/नवीन शिशिर विक/अविनाश चौधरी/अमरराज नहर्की/टीकाराम उप्रेती
काठमाडौंँ, माघ १४ गते । नेपालमा आजबाट देशव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ । खोप पहिलो चरणमा चिकित्सक, नर्स तथा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, शव व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाइ गर्ने व्यक्तिलाई लगाइदैछ । केही दिनअघि भारत सरकारको अनुदानमा १० लाख डोज खोप नेपाल ल्याइएको हो ।
गोरखापत्र विराटनगर समाचारदाता नवराज कट्टेल अनुसार प्रदेश १ का आठ जिल्लामा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ । कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.चुमनलाल दास र वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियल डा.दिपक सिग्देलले विराटनगरमा बुधबार पहिलो खोप लगाउनुभएको हो ।
हाम्रा डोल्पा समाचारदाता विष्णुलाल बुढाका अनुसार हवाई सेवाका कारण ढिलो गरी आजै डोल्पा पुगेको कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ ।
यसैबीच गोरखापत्रका नवलपरासी पुर्व (नवलपुरमा)का समाचारदाता ज्ञानु पंगेनीका अनुसार बुधबारदेखि कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ । जिल्लाको मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल डण्डामा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डा. गोपाल खनाललाई पहिलो खोप लगाउदै खोप अभियानको शुरु भएको छ । सरकारले कोभिड १९ विरुद्धको खोप ल्याएसंगै जिल्ला जिल्लामा खोप अभियान शुरु भएको हो ।
यसैबीच गोरखापत्र नेपालगञ्ज (बाँके) समाचारदाता सिराज खानका अनुसार नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. प्रकाश थापालाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर बाँकेमा खोप अभियान शुरु गरिएको छ ।
बागलुङ जिल्ला समाचारदाता नवीन शिशिर विकका अनुसार धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा कार्यरत डाक्टरलाई कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप लगाएर बागलुङको खोप अभियानको सुरुवात गरिएको छ ।
धनगढी समाचारदाता अविनाश चौधरीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान आजदेखि सुरु गरिएको छ ।
तनहुँ समाचारदाता अमरराज नहर्कीका अनुसार तनहुँमा कोभिडविरुद्ध भ्याक्सिन लगाउने अभियान बुधबारबाट शुरू गरिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले दमौली अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयको नव निर्मित भवनमा केन्द्र राखेर पहिलो चरणको खोप अभियान सञ्चालन गरिएको छ । अभियानको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यले शुरुआत गर्नुभयो । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको थप्रेक स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत वीरेन्द्रकुमार चौधरीलाई खोप लगाएर अभियान शुरु गरिएको हो ।
झापा समाचारदाता टीकाराम उप्रेतीका अनुसार कारोना भइरस कोभिड–१९ बिरुद्धको खोप लगाउने काम झापाका तीन वटा केन्द्रमा एकै पटक सुरु भएको छ ।
धनकुटा समाचारदाता कोकिला भण्डारीका अनुसार जिल्ला अस्पताल धनकुटामा आजबाट कोभिडविरूद्धको “कोभिसिल्ड” खोप लगाइदै अभियानको शुरुवात गरिएको छ ।
दार्चुला समाचारदाता लोकेन्द्र जोशीका अनुसार दार्चुलामा पनि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान शुरु भएको छ । बुधवार विहान ११ बजेर ७ मिनेटमा स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख जयराज भट्टलाई पहिलो खोप लगाइएको छ । कोरोना विरुद्धको खोप लगाएपछि सुरक्षित महसुश भएको र आत्मबल बृद्धि भएको स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख भट्टले प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
दमक समाचारदाता विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार दमक सहित झापाका बिभिन्न अस्पतालहरुमा बुधबारदेखि कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउन शुरु गरिएको छ । झापाका सरकारी अस्पतालहरुमा मापदण्डको पालना गर्दै खोप हान्न शुरु गरिएको हो । भारतसंग सिमा जोडिएको झापामा कोरोना संक्रमण धेरै नै देखिएको थियो ।
महोत्तरी समाचारदाता नागेन्द्रकुमार कर्णका अनुसार कोरोना कोभिड विरुद्धको कोभिशिल्ड खोप कार्यक्रम वुधबारदेखि महोत्तरीमा दिन शुरु गरिएको छ । जलेश्वर अस्पतालको प्राँगनमा शुरु भएको खोप कार्यक्रममा जलेश्वर अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिडेन्टेन्ट डा.प्रभातकुमार गामीलाई दिएर खोप कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको थियो ।
इनरुवा समाचारदाता जयकृष्ण यादवका अनुसार सुनसरीमा कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो खोप सदरमुकाम इनरुवाका एम्बुलेन्स चालक नारायण मण्डललाई लगाएको छ । बुधबार इनरुवा अस्पतालमा स्थापना गरिएको खोप केन्द्रमा पुगेर ४७ वर्षिय मण्डलले कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज लगाउनुभयो ।
स्याङ्जा समाचारदाता अर्जुन काफ्लेका अनुसार कोरोना भइरस (कोभिड १९) विरुद्धको भ्याक्सिन स्याङजा पनि लगाउन शुरु गरिएको छ ।
लमजुङ समाचारदाता बेलिना थापाका अनुसार लमजुङका १ हजार ५ सय ७० जनालाई कोरोना भाइरस (कोभिड १९) विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ ।